यदि सत्ता पक्षले अहिलेको संविधान हुबहु मान भन्न खोजेको हो भने वार्ता मा किन बस्ने? वार्ता जरुरी छैन। त्यसै गरी मधेसी मोर्चाले हाम्रो ११ बुँदे जस्ताको तस्तै मान भन्न खोजेको हो भने वार्ता मा बस्ने नै किन? बरु यो फेज २ लाई फेज ३ का लागि गृह कार्य गर्ने समय को रुपमा सदुपयोग गर्ने।
तर सही निर्णय हो वार्ता। अर्थात सत्ता पक्षले संविधान संसोधन हुन्छ र ११ बुँदे को प्रत्येक बुंदा मा विषय प्रवेश गर्नै पर्छ। त्यसै गरी मधेसी मोर्चा ले ११ बुंदा मा कहाँ सम्म लचक हुन सकिन्छ भनेर आतंरिक वार्ता गर्नु पर्यो। ११ बुँदे को रट लगाएर वार्ता गर्ने भन्ने हुँदैन। गृह कार्य गर।